Dhimmi Oromoo kan dursa argachuu qabu otuu jiruu maaliif dhimmoota biroorratti yeroo keenya fixna? | freedomfororomo
Posted by Itana Guteta on June 16, 2013
← Ayyaantuu News Online : Urgent Appeal regarding Oromo Refugees in Egypt –
VOA: G/D jiraataa Mayyuu Mulluqqee wajjiin haala yeroo ammaa achiti deemaa jiru irraatti taasise →
One comment on “Dhimmi Oromoo kan dursa argachuu qabu otuu jiruu maaliif dhimmoota biroorratti yeroo keenya fixna?”
Lencho Tola Robi on June 17, 2013 at 2:37 pm said:
Hayyee Abdii Boruu yaanni kee baay’ee gaariidha Jabaadhu. Ana garuu namoonni maaf akka faaydaa habashaa qabatanii akka oliifii gadi deeman baay’ee tokko na gaddisiisa. Bara dheeradhaaf amantaadhan, naannodhaan, diina walitti nu godhanii mala qoddadhan bulichuu (|division rule) isa jedhuun nu bulichaa turanii fi nu bulchaa jiran maaf wallaallaa? Maaf ofi baruu dadhabnee? Har’allee maaf meeshaa diinaa taanee walitti duullaa? Lakkii yaa lammii koo amantaan waan bilsummaa booda dhufuu hubadhaa. namin biyya hin qabne, waan nyaatu hin qabne, mirga amanuu hin qabne fi kkf akkamitti akkamiin amantaa isaa barsiifachuu ykn adeemsifachuu danda’aa? Yoo bilsummaanuu jirti kan jennu taate amantaa ofii barsiiseetu nama amansiisa malee akkamitti lammummaa fi qabsoo lammummaa waliin walitti makaa? Kan biroo immoo maqaan Oromummaa hin ibsu, ykn Orommummaa namaa hin kennu. Baroo qabna jarana Abbaaduulaa, kumaa damaksaa, Dhaabaa Dabalee fi kkf Oromummaa warraa lafa irraa duguugee, Itoophiyummaa labsaa jiruudha. Osoo akka maqaatii isaantuu Oromummaa ijaara, oromummaa labsa. kanaaf maqaa namaa ilaaluun Oromummaa nama sanaa qeequun nutti haa hafu warra maqaa Oromoo isa guddaa qabutu Oromummaa lafa irraa duguugaa jiraa. Dhumaratti namin siyaayaa tokko osoo dhimma amantaa keessa seenuu baatee baay’ee gaaridha. Dhimmi amantaa kun namoota doctrine amantichaa gadi bu’ee hin beekneef dhimma ho’aa waan taheef itti dhiisnee waa’ee uumataa fi mirga uumataa qofa osoo qeeqnee baay’ee gaariidha. nama siyaasa gadi bu’ee beekuuf immi amantaa biyya kamuu akka hin gudisnee fi akka nageenya hin kenineef dhima dhihoo keenyatti argaa jiru. Waan tokko namoonni gadi bu’anii amantaa beekna jedhan yoo jiraatan, akka amantaan kamuyyuu sabaa isa uumeef loogii tahanii uumanan hubachuun kitaabuma amantaa irraa ka’a. Fakenya, Raajeffataa Muuseen/Muussaan yoo mana Fari’on bahu namich Misraa tokko yoo Isira’elicha tokko ajeesu argee itti eekamee innisi namicha Misiraaa sana ajeesee bahee deeme. Martiin luutarillee Kaatolikiin Roomaa waa’ee qarshii gara biyya isaanii Roomitti Jarman irraa maqaa amantaan funaananiif Jarman akka maqaa amantaan saamaa jiran argee ani ni morma jedhee amantaa Proteestaanti uume beekamaadha. kan biroosi akkasuma. Kanaaf mee yaa lammii koo hubadhaa Oromummaan yoo jiraatte musliimummaan ykn christanumman ykn waaqefatummaan jiraatti malee bakka kun hin jiretti waa’ee amantaa irratti wali mormuun mwwshaa diinaa hin ta’uu irraa ofi eegaa jechhuun barbaada. dhuma irratti isin warri siyaasa beektan amantaatti dawoo godhatanii tokkummaa Oromummaa diiguuf warri meeshaa diinaa tahuu barbaadan qabsoo sabaa irraa bu’aa, quraana ykn kitaaba qulqulluu qabadhaatoo wali mormaa saballee maqaa hin dhahinaa dhimmi lachuu waliif diina. Diinni diina caalu diina keessa waan taheef yoo baratanii kabajamuu mirga Oromoof dhaabattan dubii akkanaa dhaabaa. Jawaari immoo akka hubataa siyaasaatti qabsoo oromoo fi dhimmaa amantaa isilaamummaa akka addaan baasu fi uummani Oromoo amantaa kamuu hordofu akka abdii isarraa eegu hubatee akka amantaa keessa seenee amantaa fi oromummaa addaan baasee beeku gochuun barbaachisaadha. Galatoomaa Oromoo Tokkuummaa kenya ilaalee jawween akka du’uuf wixxirfatu hubachuudadhabuun walitti hin duulinaa. Har’a tana tokkummaan oromoo cimaa jiraachuu eshe hubadhaa.